November 5, 2020 - Padaethar
November 5, 2020 by Padaethar
ယောက်ျား တစ်ယောက်ကို (သူကိုယ်တိုင်တောင် မသိလိုက်ရပဲ)ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို ပျိုမေတို့ကို ပြောပြ ပေး ချင်ပါတယ်။ဒါဟာအမျိုးသမီးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ဖြစ်ပါ တယ်။ (၁)ကလေးလိုဆက်ဆံပါ ယောက်ျားတွေဟာ တခါတလေမှာ ကလေးတစ်ယောက်လို ပြုမူတက်ပါ သလား? သေချာပါတယ် လုပ်ဖူးမှာပါ။ကလေးတစ်ယောက်လို အပြုအမူတွေ ကို ယောက်ျားတစ်ယောက်ဆီမှာတွေ့ရင် မိန်းမတွေက မချင့်မရဲအမူအယာမျိုးနဲ့ တုံ့ပြန်လေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလိုအခြေအနေမှာ လက်ကမ်းဖေးမပြီး၊ အမေလို၊အမလိုပုံမျိုးနဲ့ တုံ့ပြန်ဆက်ဆံပေးရမှာပါ။ဒါကြောင့် တစ်ယောက်တည်း သူလုပ်ချင်ရာလုပ်ပါစေဆိုပြီး လွှတ်ထားတာမျိုးမလုပ်ပဲ သူလုပ်သမျှအရာတိုင်းမှာ အမြဲဝင်ပါပါ။၀င်လုပ်ပေးပါ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူကိုယ့်အပေါ်မှီခိုတဲ့အရာတွေ များလာ ပါစေ။နောက်ဆုံး ကိုယ်မရှိရင် ကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်ဘူး။အဆင်မပြေနိုင် ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး သူ့စိတ်ထဲမှာ ၀င်သွားပါလိမ့်မယ်။ (၂)ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်း ယောက်ျားတော်တော်များက စိတ်ဆိုးလာရင် ဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်လေ့ရှိပြီး အတွင်းစိတ်ကို မျိုးသိပ်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း အရမ်းကိုနည်းပါးတတ်ပေမယ့် … Read more
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအရေပျော်ဝင်စေတဲ့ နည်းလမ်း( ၇ )ခု
ကိုယ့်လင်ယောက်ျားတွေကို ပြုစုအားပေးချင်တဲ့ မိန်းမတွေအတွက် ဒီမှာ ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့ အပြုအမူလေးတွေကို ရေးပြပါမယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြုစုအားပေးချင်ရင်တော့ အချိန်ပေးပြီး သူ့အကြောင်း လေ့လာရမှာပါ။ ကျွန်တော့်ကို ပျော်စေတဲ့ အရာ ၇ ခုကို နမူနာအနေနဲ့ ရေးပြပါမယ်။ ၁. ကိုယ့်ဘာသာ ဂရုစိုက်ပါ မိန်းမ တော်တော်များများဟာ လင်တွေ သားတွေကို ဂရုစိုက်ရလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ဂရုစိုက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အရင် ဂရုစိုက်တာဟာ တကိုယ်ကောင်းဆန်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ လှပနေခြင်းနဲ့ သူများတွေကို လေးစားပေးတာပါ။ ၂. နင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဂရုစိုက်ရင် ငါပိုချစ်တယ် လို့ ပြောခြင်း ယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့ မလုပ်ချင်ဆုံး အရာဟာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရခြင်းပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် မိန်းမက ကျွန်တော် … Read more
ယောက်ျား တစ်ယောက်က ပြောတယ်…… (၁) မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ သိပ်ချောသိပ်လှစရာမလိုဘူး။လူကြားသူကြားထဲခေါ်ထွက်လို့ရပြီး အိမ်အပြန်ခေါ်ပြန်လာလို့ရရင် ရပြီ။ (၂) ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတိတ်ကို ငါလိုက်မမေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက် ငါ့တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ကောင်းကောင်းချစ်ရင် ရပြီ။ (၃) အလုပ်လုပ်ချင်ရင် အလုပ် တစ်ခုရှာလုပ်နိုင်တယ်။ မလုပ်ချင်ရင် အိမ်မှာပဲ အိမ်ရှင်မ အဖြစ် ပီပီသသနေ။ နင့်ကို ငါယူရဲရင် နင့်ကိုကျွေးနိုင်တဲ့အား ငါ့မှာရှိတယ်။ (၄) တခြားလူလောက် ငါချမ်းသာချင်မှ ချမ်းသာမယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားလူ နင့်ကိုပေးနိုင်တဲ့အရာ ငါလည်းပေးနိုင်တယ်။ (၅) နင့်အနားမှာ ငါနေ့တိုင်းအဖော်ပြုနိုင်ချင်မှ ပြုနိုင်မယ်။ ဒီအိမ်အတွက် ငါအပြင်ထွက် ရုန်းကန်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် ငါ့ဖုန်းဘယ်တော့မှ ပိတ်မထားဘူး… ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ငါ့ကို နင်ရှာတွေ့နိုင်စေရမယ်။ (၆) သူငယ်ချင်း တစ်သိုက်နဲ့ ငါ … Read more
မိန်းမ တွေ လျှို့ဝှက်ထားတတ်တဲ့ အရာ ၅ မျိုး
လက်ထပ်ပြီးနောက်မှာ သူ့ဘဝ ကိုယ့် ဘဝ မခွဲခြားပဲ ပစ္စည်းတွေကို အတူတူသုံးစွဲတာ၊ လျှို့ဝှက်ချက် မထားတာဟာ ဘဝပျော်ရွှင်ဖို့ အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူ ဆီကတောင် မိန်းကလေးတွေ လျှို့ဝှက်ထားတတ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အထင်မလွဲပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့မှာလဲ ရှိတတ်ကြတာပါပဲ။ ကျွမ်းကျင်သူတွေက မိန်းမတွေ လျှို့ဝှက်ထားတတ်တဲ့ အရာ ၅ မျိုးကို ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့…… ၁. ကျန်းမာရေး ပြသနာများ မိန်း မတစ်ယောက်ဟာ ရင်သားထဲမှာ အလုံးတွေ့တာလိုမျိုး ကျန်းမာရေးပြသနာ တစ်ခုခု ရှိလာရင် အဲဒါကို ပြောမပြတတ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီး တွေက သူတို့လင် စိတ်ဖိစီးမှာစိုးလို့ ကျန်းမာရေးပြသနာ အကြီးကြီးဆိုရင်တောင် ပြောမပြတတ်ကြပါဘူး။ တိတ်တိတ်လေးနေပြီးမေ့ထားတာဟာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ အဲဒါဟာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် … Read more
ယောက်ျားတွေဟာ သူတို့အမှန်တကယ် စိတ်ရင်းနှင့် နှစ်နှစ်ကာကာချစ်တဲ့ မိန်းကလေးကို ဘယ်တော့မှ မထားခဲ့သလို ကြင်နာနွေးထွေးမှု ၊ ဂရုစိုက်မှုဆိုတာ တောင်းစရာမလိုအောင်ကို အလိုလိုပေးပြီးသားပါ။ နောက်ပြီး ဒီလိုယောက်ျားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ relationship ကို ပိုပြီးရှည်ကြာခိုင်မြဲအောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ အကယ်၍များ အောက်ပါအချက်တွေကိုသာ သင်၏ချစ်သူအမျိုးသားက လုပ်ဆောင်တတ်တယ်ဆိုလျှင်တော့ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သင့်ကို အချစ်စစ်နဲ့ချစ်တဲ့ချစ်သူကို ပိုင်ဆိုင်ထားရပါပြီ။ ၁။မျှဝေတယ် ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အမှန်တကယ်ချစ်သွားပြီဆိုလျှင် ဘယ်အရာမဆိုကို ထိုမိန်းကလေးနှင့်အတူ မျှဝေခံစားပါတယ်။ အိမ်တွင်းရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်၊ လူမှုရေး စတဲ့ကိစ္စရပ်များအပြင် တစ်ခါတစ်ရံ ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကအစ မျှဝေသိစေပါတယ်။ အချို့ကိစ္စလေးတွေကလွဲလျှင် privacy ကို နေရာတိုင်းမှာ လက်ကိုင်မထားတတ်ကြသူတွေပေါ့။ ၂။ဘယ်နေရာသွားသွားလက်တွဲသွားတယ် လက်တွဲခြင်းက ချစ်သူစုံတွဲတို့၏ သင်္ကေတစ်ခုဆိုသော်လည် ဘယ်နေရာကိုပဲသွားသွား မိန်းကလေး၏လက်ကို တွဲသွားတတ်တယ်ဆိုလျှင်လည်း ထိုယောက်ျား၏အချစ်ကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ … Read more
၂၀၂၀-ခု ၊နိုဝင်ဘာလအတွက် (၁)လစာ ကံကြမ္မာအထူးဟောစာတမ်း
၂၀၂၀-ခု ၊နိုဝင်ဘာလအတွက် (၁)လစာ ကံကြမ္မာအထူးဟောစာတမ်း ဗေဒင်ချစ်သူတွေတွက် နိုဝင်ဘာလ ကံကြမ္မာ ဟောစာတမ်း လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ဒီလအတွင်းမှာ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ပြောရရင်တော့ ကံကြမ္မာက အကောင်းဘက်မှာ အလေးသာနေပါတယ်။ ဘာလုပ်လုပ် ဘာကိုင်ကိုင် အဆင်ပြေမယ့် အချိန်ပဲ ဆိုပါတော့။ ဒါကြောင့် သင် ပိုင်ဆိုင်သော အချိန်ကာလတွေကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းပေတော့။ ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်စုံ အောင်မြင်မယ်။ တနင်္လာနံ ( ခြံ ၊ ကား ၊ အခန်းကိစ္စ ၊ ငွေကြေး) ဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနံ (ယဉ်၊ ရွှေ ၊ လူ ၊ အနုပညာ ၊ အလှပညာ) လုပ်ငန်းများနှင့် ပါတ်သက်၍ တိုက်ရိုက်၍သော်လည်းကောင်း … Read more
5.11.2020 မှ 11.11.2020အထိ တဈပတျစာ ၇ရကျသားသမီးဟောစာတမျး တနင်ျဂနှေ ယခုကာလမြားအတှငျ မိနျးမနှငျ့ ပတျသကျသော အရှုတျအထှေးမြား ရငျဆိုငျရတတျပါသညျ။ မကျြနှာမှာ လညျး မတျောတဆ ထိခိုကျဒဏျရာမြား ရတတျပါသညျ။ လုပျငနျးအကွံအစညျသဈမြား ပျေါပေါကျ လုပျကိုငျရ တတျသညျ။ သငျအလှနျအမငျး အဆငျပွနေပွေီဟု ဆှမြေိုးအပေါငျးအသငျးတို့အားလုံး၏ အထငျကွီး လေးစားမှုကို ခံရမညျ။ သူခိုး၊ သူဝှကျ မကျြစိကနြသေော အခြိနျကာလဖွဈပါသညျ။ သှပျ၊ သံ၊ သဈ၊အိမျဆောကျပစ်စညျး လုပျငနျး မြား လုပျကိုငျသူမြား အထူးအကြိုးပေးသော အခြိနျကာလဖွဈပါသညျ။ သငျ့လကျတဈကမျးသို့ ရောကျရှိ နသေော ကံကွမ်မာ အခှငျ့အလမျးကောငျးမြားကို အမိအရဆုပျကိုငျ၍ လုပျဆောငျပါ။ မိတျကောငျး ၊ ဆှကေောငျးတဈယောကျ နှငျ့ ဆုံတှရေ့မညျ။ ပညာရပျတဈခုခု ကိုလညျး သငျရတတျမညျ။ သို့သျော နားလညျတကျမွောကျဖို့ခကျနလေိမျ့မညျ။ … Read more